Soomaali Libiya Madax Furasho loogu Haysto | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaali Libiya Madax Furasho loogu Haysto
Mogadisho, (Keydmedia) - Qeylo dhaan ka soo yereysa Boqolaal Muwaadiniin Soomaali ah oo ku xir xiran Xabsiyada Dalka Liibiya iyagoona ka Cabanaya tacaddiyo falaal waxash-nimaa sida: Kufsi,Jir dil iyo gaajo.
Xabsiga Magaalada Misarata ee Dalka Liibiya ayaa waxaa ku Xiran Soomaali Tiradooda lagu sheegay 3Boqol iyo Soddon Muwaadiniin Soomaali ah.
Haweeney lagu magacaabo Deeqo oo ka mid ah Maxaabiista Soomaalida ah ee halkaa ku Xiran ee war baahinta caalamka la hadashay ayaa sheegtay in halkaas ay ku haystaan Rag Maliishiyaad ah oo uu hoggaaminayo Nin u dhaqmaya sida Hoggaamiye Kooxeedyada aan arxan laheyn.
Deeqo ayaa sheegtay in Kooxdaas Maliishiyada ah ay weeydiisteen Maxaabiista halkaa ku Xiran in ay bixiyaan lacago madax furasha. Ma jirto Safaarad iyo Dawlad Soomaaliyeed oo u danqaneysa dadkeeda. Inta ay sheegtay Marwo Deeqo waa sax. Wayo Shariif Mood, Shariif Sakiin, C/waal iyo Mahiga waxay kursiga ugu fadhiyaan oo misana u sii radinayaa waa dantooda GAARKA.